Wednesday June 16, 2021 - 11:49:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kulan ay shalay magaalada Dooxa ee dalka Qadar ku yeesheen wasiirrada arrimaha dibadda ee Ururka Jaamacadda Carabta ayay uga hadleen khilaafka ka taagan biya xireenka ay Itoobiya ka dhisayso webiga Niil.
Jaamacadda Carabta ayaa taageertay qoondada ay Masar iyo Suudaan ku leeyihiin webiga Niil waxayna ugu baaqday 'Golaha ammaanka' in uu kulan degdeg ah ka yeesho arrimaha khilaafka biya xireenka Al Nahda.
Wasiirrada arrimaha dibadda dowladaha ku bahoobay jaamacadda Carabta ayaa bayaanka ay soo saareen ku sheegay in murunka ka taagan biya xireenka uu sababi karo loollan caalami ah.
Dhinaca kale dowladda Xabashida Itoobiya ayaa si kulul uga hadashay warka kasoo yeeray carabta waxayna sheegtay in kiisaska ku saabsan Al Nahda aan loo baahnayn in lacaalamiyeeyo.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa cadaalad darro ku sifeeyay qaabka uu ururka Jaamacadda carabta uga hadlay ismariwaaga ka taagan qeybsiga biyaha webiga Niil.